No mamaly ny olona raha tsy misy ny sary ao amin’ny fiarahana
Aho hamaly, saingy ny valiny dia ahy milaza ny mpampiasa izay tsy mifanaraka amin’ny mpampiasa amin’ny latsaky ny mombamomba sary. Ankoatra izany dia tsy hamaly ireo mpampiasa miaraka foana ny mombamomba. Izaho mahita fa fanevatevana izany ianao dia ho toy ny mpampiasa afaka maka minitra mba mampakatra vitsivitsy sary sy lahatsoratra fehezan-teny vitsivitsy momba ny tenanao, nefa te-hifandray amin’ny mpampiasa izay nisafidy ny handray ny fotoana. Dia manome lanja ny fotoana toy ny mpampiasa izay manapa-kevitra ny handao ny mombamomba ny banga. Ny fepetra takiana ho an’ny valiny dia Mombamomba ny Sary, ny Mombamomba’, fara fahakeliny, fehezan-teny, sy ny hafatra voalohany izay tsy ahitana latsaky ny teny.
Ny fepetra takiana amin’ny nijanona, Bios maintsy manana, fara fahakeliny, teny. Tsy hiaraka na mampiaraka toerana satria halako ny zava-misy fa tsy maintsy fanjakana rehetra ny mombamomba, toy ny fidiram-bola, na vaovao dia tsy manan-danja ho ahy (Shinoa biby na ny kintana sonia). Niezaka ny misoratra anarana, fa rehefa nahita ny vaovao aho mila manome, dia nijanona.
Tsia, tsy ny fomba tokony ho izy
Aleoko ny mampiaraka toerana miaraka amin’ny fifantohana eo amin’ny fizarana tantara sy ny hevitra voalohany, dia tsy manao ny zavatra rehetra ho tonga fahatsaran-tarehy sy ny fidiram-bola fifaninanana. Fantatro fa ny mampiaraka toerana mety tsy misy. Raha misy tsy manana ny sary, ny saina mena. Maro loatra ny safidy avy any mba hanelingelina amin’ny iray efa maneho izany lehibe ny saina mena. Tsia, tsy hoe satria noho ny amiko dia zava-dehibe ny fomba ny olona mijery sy tsy momba ny hatsaran-tarehy, dia bebe kokoa momba ny fisokafana sy ny fifampitokisana. Aho te-hahalala izay aho miteny, tsy misy olona tena na sandoka. Raha mahita ny ao amin’ny fampiharana toy ny Tinder foana ny mombamomba azy aho dia tsy toy izany. Toy izany tsy hoe na inona na inona momba ny olona
← Hahita maimaim-poana sy tsy misy fisoratana anarana
Hafa Chatroulette →